Isnye Bụ Onye Ikpe nke Ahịa Gị? | Martech Zone
Monday, December 29, 2014 Fraịde, Jenụwarị 2, 2015 Douglas Karr
Emeela m ya n’isiokwu m dere n’oge gara aga. M ọjọọ-n'ọnụ usoro na marketers ji… si iji curvy ọnụ na touting mkpari utịp. Marketingfọdụ ahịa na-ada mba m. Mana enweghị m nsogbu na akụkụ ahịa, echiche m anaghịkwa eme ihe n'eziokwu.
N’oge na-adịbeghị anya, otu enyi gị nyere ụlọ ọrụ ihe yitụrụ kaadị yiri nke ọma nke nwere adres e ji aka dee na ihe mmado etinyere na adreesị nzaghachi. Eketie nte n̄kpọ eke okoto ufan m̀m friend ubon. Kaosinadị, mgbe o mepere - o nwere onyinye ma chee na a ghọgburu ya. O wutere ya nke ukwuu, were foto ma kesaa ya na Facebook.
Anaghị m ajụ ma ọ kwesịrị iwe iwe ma ọ bụ na okwesighi - nke ahụ bụ azụmahịa ya. O ruuru echiche ya. Ajuju m kwuru na nzaghachi bụ olee ebe abụghị marketingre ahịa ụdịdị ụfọdụ. Anyị na-emepụta saịtị maka obere mmalite nke na-eme ka ha dị ka azụmaahịa ụlọ ọrụ. Anyị na-ekepụta akwụkwọ ọgụgụ nke ụwa maka ndị ahịa na-agba mbọ maka mmefu ego ha. Anyị na-echekwa ihe ọmụmụ na akaebe nke ndị ahịa na-enweta nsonaazụ kacha mma.
Nke ahụ ọ dị aghụghọ?
N’uche m, ịre ahịa dị ka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Don't naghị aga ụbọchị na sweats ndị ahụ na-adịghị mma ị na-atụ. Take na-asa ahụ, ị ​​na-eji ejiji, ị ga-enweta ntutu gị ziri ezi wee tụfuo ụfọdụ cologne… ịchọrọ ịdị mma.
You na-aghọ aghụghọ?
Nghọta nwere ike ee. Na-achọ ịdọta mmadụ iji hụ otu ị masịrị ha. Emechaa ụbọchị ole na ole, ị nwere ike ma ọ bụ kpebie imekwu mmekọrịta ahụ.
Inweta mpempe akwụkwọ ozi edepụtara na aka nwere ike ịdọrọ mmadụ iji mepee ya. Mgbe m gbara ọrụ ozi ozigbo, agwara m ndị ahịa anyị na anyị kwesịrị ịdọta uche mmadụ na obere ije dị n'etiti igbe akwụkwọ ozi na trashcan. Nke ahụ chọrọ ụfọdụ okike dị mkpa iji pụọ na igwe mmadụ. Teknụzụ agbanweela nke ukwuu na ozi ederede na ụfọdụ ndị na-ebi akwụkwọ nwere sistemu n'ụzọ nkịtị dee aha mmado na udiri udiri edemede a ka o nweghi mkpuru edemede abuo!
Aga m agbakwunye na teknụzụ ndị ahụ adịghị ọnụ. Ndị mgbasa ozi ahụ mefuru karịa na kaadị ejiri aka dee (ụdị) karịa ka ha ga-akwụnye naanị maka ozi izipu ozi otu igbe na igbe ozi. Imefu ego ndị ọzọ mepụtara n'ezie mere ka ọnụego njikọ aka dị elu ma yikarịrị ka ọ kpatara mgbanwe ntụgharị ka ukwuu.
Ezi ajụjụ ma ọ bụ na ọ bụghị ma ahia dị aghụghọ abụghị nke m ma ọ bụ nke enyi m. Ezigbo ọkàikpe bụ atụmanya na n'ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ na-ejide ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ndị ahịa churn bụ nnukwu okwu, marketer nwere ike ịbụ na-adọta ndị ahịa mana ha nwere ike -enweghị atụmanya na mkpa hazie ha ahịa azum.
Echeghị m na ị na-adọta mmadụ imeghe, ilele ma ọ bụ pịa bụ aghụghọ - ekwenyere m na ọ bụ ọrụ nke ndị na-ere ahịa ịkwaga ndị mmadụ na njem ahịa yana rue mgbe enwere ike ikpebi ma ndị ahịa ha nwere ike irite uru na gị na ha .
Imeghe envelopu emeghị ka onye ọ bụla nwee ndenye aha, ọ mere nnukwu ọrụ iji mee ka ahịa ha lelee kama itinye ya na ahịhịa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla m na-ahụ ka m na-ele azụmahịa, na-ebudata akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha, ma ọ bụ na-emeghe ozi email m chere na ọ bụ igbu oge m. Anaghị m ewe iwe maka ya, echeghịkwa m na ọ dị aghụghọ.
M na-aga n'ihu.
Tags: nduhieahia aghụghọozi ederedeaka-ede